Shrimp and Crab Manufacturers - Shiinaha Shrimp And Crab Suppliers & Factory
Shrimp Artificial Doonista Kalluumaysiga Jilicsan Jilicsan Qaniinyada
Qiimo jaban Bionic Bait Glow Swim Bait Kalluumeysiga Jilicsan ee Caagga ah Lure Squid Jig Shrimp
2. Nooca Dareenka: Cawsha / Shimbiraha Jilicsan ee jilicsan - Xirmooyinka balaastigga ah ee jilicsan ayaa ka kooban jilayaal kala duwan oo kala duwan, oo badiyaa loo adeegsado kalluumaysiga baska.
Jilib Jilib Jilib Jilicsan Oo Soo Jiidanaya Indho Iftiimin Leh Kalluumeysi
Dabacsanaan Jilicsan 7CM/9CM Baasaska Dabaasha Shrimp Dabeylaha Kalluumaysiga Daran
Kalluumeysigu wuxuu soo jiitaa Jilibyada Jilicsan ee Jilicsan ee Xirmooyinka Fudud / Shrimp
Habka Kalluumeysiga: Duulista Kalluumeysiga Badda Kalluumeysiga & Doonta Kalluumeysiga Guud Kalluumeysiga Lure Kalluumeysiga Bass Kalluumeysiga Kalluumeysiga Kalluumeysiga Kalluumeysiga Kalluumeysiga
2. Nooca Dareenka: Jerkbaits Bait jilicsan - Baasaska caagga ah ee jilicsan ayaa ka kooban noocyo kala duwan oo soo jiidasho leh, oo badiyaa loo isticmaalo kalluumaysiga bass. Caws / Shrimp
Kalluumeysiga Jilicsan ee Jilicsan Shrimp Nacnac Artificial ah
Soo jiidashada Squid jilicsan
1.Material: suufka silikoon
3.Kulan: Boqolaal midabbo ayaa la heli karaa.
4.Xirmada: bacda OPP.Buritaanka macaamilka waa la aqbalaa.
5.Function: moodooyin kala duwan oo ku habboon kalluumeysiga biyaha macaan iyo kalluumeysiga biyaha cusbada
6. Kalluun soo jiidasho leh ayaa uriya iyo ficil dabaasha nool.
7.Best for trolling kalluumaysiga.
8. Naqshado la habeeyey, Calaamadda Gaarka ah ayaa la soo dhaweynayaa.
Qiimaha Warshadda Shrimp Jilicsan Jilicsan
Gawaarida jilicsan ayaa ah kuwa ugu jecel basaska. Ka dib markii ay ku quustay biyaha gunta, dusheeda iyo salka usha ayaa xoogaa gariiraya, taasoo ka dhigaysa sed inay kor iyo hoos u booddo si ay u soo jiidato kalluunka la beegsanayo. Boodhka yar ee haleyga dushiisa ayaa sidoo kale soo jiidan kara yoolka biyaha. Laakiin waqtiga ruxitaanka waa inuusan noqon mid aad u dheer, waa inuu jiraa dareen laxanka, dareenkani wuxuu u baahan yahay in lagu qabto dagaalka dhabta ah.
Bass aan dabiici ahayn oo Shrimp Shrimp Caag ah
Jilibka Cunto -doonka ah ee Beenta Baat 3D Jilidda Kalluunka Jilicsan
Caagagga jilicsan ee jilicsan ee noolaha aan kala goyn karin
Jidhka jilicsan ee 1.3D waa dabacsanaan, taasoo ka dhigaysa kalluunka ugaarsiga.
Jidhka guduhu wuxuu adeegsadaa warqad tainbow ah oo si fiican u tarjumaysa iftiinka, soo jiidashada kalluunka isla markiiba.
Jir jilib jilitaan, ficil dabaasha oo cad.
4.Super jilicsan, fidsan oo waara; ugu dambayntii qabasho badan
5.Ee bii'ada u fiican, noolaha aan kala goyn karin, sunna lahayn
Dabool Crab jilicsan oo jilicsan
Lifelike Bait Bionic Glow Crab Qaboojiyaha Jilicsan Caagagga Wax Ka Qabashada Kalluumaysiga
Midabo badan (aqbal caadada)